Tag: akụkọ ifo | Martech Zone
Mkpado: akụkọ ifo
Echiche Mygha nke Onwe
Mọnde, Febụwarị 15, 2016 Douglas Karr
Otu n'ime ihe ngosi mmịakọta nke m na-atụle n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkparịta ụka ọ bụla m nwere na azụmaahịa bụ nke m kpọrọ akụkọ ifo nke njiri mara. Na sistemụ ọ bụla, anyị na-ahọrọ ụkpụrụ omume ọma na nke ezi uche. Ọ bụrụ na nke a, mgbe ahụ. Ọ bụ nsogbu, n'agbanyeghị, n'ihi na ọ bụghị otu ahụ ka esi eme mkpebi ịzụta. O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa ma ọ bụ na ị bụrụ azụmahịa - ọ bụghị eziokwu nke njem ndị ahịa.